यी हुन् नेपाली फुटबल टिमका नयाँ कोच, के उनले नेपाललाई बिश्वकपमा पुर्याउलान् त ? | TajaKhabarTV
यी हुन् नेपाली फुटबल टिमका नयाँ कोच, के उनले नेपाललाई बिश्वकपमा पुर्याउलान् त ?
२०७७, २२ चैत्र आईतवार १८:५३ April 4, 2021 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडाैं, २२ चैत । कुवेती अब्दुल्लाह अलमुताइरी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बन्ने भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले टेक्निकल कमिटीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ ।
अलमुताइरीले आगामी जुन महिनामा हुने विश्वकप छनोटका तीन खेल र यही सेप्टेम्बरमा हुने साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाली टिम सम्हाल्नेछ । उनलाई हालको लागि एक वर्षको लागि जिम्मेवारी बताएको छ ।
अब्दुल्लाहले नेपाली राष्ट्रिय टिममा थ्री नेसन्स कप विजेता प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनको स्थान लिएको हो । विश्वकप छनोट खेल्ने टिमको मुख्य प्रशिक्षकसँग प्रो लाइसेन्स हुनुपर्ने नियम फिफाले ल्याएपछि एन्फाले अब्दुल्लाहलाई प्रशिक्षक बनाएको हो ।
एफसी कोचिङ इन्सट्रक्टर समेत रहएका अलमुताइरी कतार फुटबल संघको सहयोगमा थ्री नेसन्स कप अगाडि नै नेपाल आइपुगेको थियो । उनले यसअघि कतार, किर्गिस्तान, साउदी अरेबिया र कुवेतका विभिन्न टिमलाई प्रशिक्षण दिइसकेको छ ।
३४ वर्षपछि रियल सोसिडाडको हात स्पेनिस कोपा डेल रे उपाधि
रियल सोसिडाडले ३४ वर्षपछि स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको उपाधि जितेको छ । शनिबार राति सम्पन्न फाइनल खेलमा एथ्लेटिक बिल्बाओलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै सोसिडाडले उपाधि जितेको हो ।
सोसिडाडलाई च्याम्पियन बनाउन मिकेल ओयार्जाबलले निर्णायक गोल गरे । मिकेल ओयार्जाबलले खेलको ६३ औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गरेका थिए । योसँगै सोसिडाडले ३४ वर्षपछि पहिलोपटक कोपा डेल रेको उपाधि जित्न सफल भएको छ । सन् १९८७ पछि सोसिडाडको यो पहिलो उपाधि समेत हो ।
बिल्बाओले भने यही अप्रिलमा कोपा डेल रेको अर्को फाइनल खेल्नेछ । सन् २०२०÷२१ को फाइनलमा बिल्बाओले बार्सिलोनासँग खेल्नेछ । फाइनल खेल अप्रिल १७ मा हुनेछ ।